ခေါင်းဆောင်အားလုံးရဲ့ အမတန်မှ စိုးရိမ်နေရတဲ့ အနေအထား... - Myanmar Thadin
ခေါင်းဆောင်အားလုံးရဲ့ အမတန်မှ စိုးရိမ်နေရတဲ့ အနေအထား…
October 13, 2021 by Myanmar Thadin
ခေါင်းဆောင်အားလုံးရဲ့ အသက် အန္တရာယ် အမတန်မှ စိုးရိမ်နေရတဲ့ အနေအထား ကျနော်တို့ အနေနဲ့ စိုးရိမ်မှုရှိပါတယ်။ အခု ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ကိစ္စဆိုရင် လိမ်ပြီး တော့ ထွက်ဆိုခိုင်းထားတဲ့အတွက် ဘယ်သူက ဘယ်လို ခိုင်းထားပါတယ်ဆိုတာကို ပြန်ပြောနိုင်ဖို့အတွက် သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ အခွင့် အရေးပေးမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး သူဟာအချိန်မရွေး သေသွားနိုင်တယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု ပြီးသွားတာနဲ့ သူသေသွားနိုင်တယ်
ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျနော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်းသူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေးတင်မကဘူး၊ အသက်အန္တရာယ်ပါ ကျနော်တို့စိုးရိမ်ပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မင်းအောင်လှိုင်က ပြောပြီးသား ၊သူမလုပ်ရဲတာ ဘာမှမရှိဘူးလို့။ သူ့အနေနဲ့ သွားရတော့မယ့်သူဖြစ်နေတယ်၊ သူ့အနေနဲ့ ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့ဘူး
သူ့အနေနဲ့က ထောင်နဲ့သေလမ်းပဲရှိတယ် အဲဒီလိုအခြေ အနေမျိုးကြောင့် သူ့အပေါ်မှာယုံကြည်လို့မရသလို တရားရုံးတွေအပေါ်မှာလည်း ယုံကြည်လို့ မရဘူးဆိုတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရော သူတို့လက်ထဲမှာအဖမ်းခံနေရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ၊ သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင် အားလုံးရဲ့ အသက်အန္တရာယ်ဟာ အင်မတန်မှ စိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ် Ref: DVB Interview
ခေါငျးဆောငျအားလုံးရဲ့ အသကျ အန်တရာယျ အမတနျမှ စိုးရိမျနရေတဲ့ အနအေထား ကနြျောတို့ အနနေဲ့ စိုးရိမျမှုရှိပါတယျ။ အခု ဦးဖွိုးမငျးသိနျး ကိစ်စဆိုရငျ လိမျပွီး တော့ထှကျဆိုခိုငျးထားတဲ့အတှကျ ဘယျသူက ဘယျလို ခိုငျးထားပါတယျဆိုတာကို ပွနျပွောနိုငျဖို့အတှကျ သူ့ကိုထပျပွီးတော့ အခှငျ့ အရေးပေးမှာ မဟုတျတော့ပါဘူး သူဟာအခြိနျမရှေး သေ.သှ.ားနိုငျတယျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအမှု ပွီးသှားတာနဲ့ သူသသှေားနိုငျတယျ
ဒါကွောငျ့မို့လို့ ကနြျောတို့ရဲ့ခေါငျးဆောငျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ ပတျသကျရငျလညျးသူ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးတငျ မကဘူး၊ အသကျအ. န်တရာယျပါ ကနြျောတို့ စိုးရိမျပါတယျ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ မငျးအောငျလှိုငျက ပွောပွီးသား ၊သူမလုပျရဲတာ ဘာမှမရှိဘူးလို့ သူ့အနနေဲ့ သှားရတော့ မယျ့သူဖွဈနတေယျ၊ သူ့အနနေဲ့ ရှေးခယျြစရာလမျးမရှိတော့ဘူး
သူ့အနနေဲ့က ထောငျနဲ့သလေ .မျးပဲရှိတယျ အဲဒီလိုအခွေ အနေ မြိုးကွောငျ့ သူ့အပျေါမှာယုံကွညျလို့ မရသလို တရားရုံးတှေ အပျေါမှာလညျး ယုံကွညျလို့ မရဘူးဆိုတဲ့အတှကျ ကနြျောတို့ရဲ့ ခေါငျးဆောငျ ဒျေါအောငျဆနျးစု ကွညျရော သူတို့လကျထဲမှာ အဖမျးခံနရေတဲ့ ခေါငျးဆောငျတှေ၊ သမ်မတကွီး ဦးဝငျးမွငျ့ အပါအဝငျ အားလုံးရဲ့အသကျအန်တ. ရာယျဟာ အငျမတနျမှ စိုးရိမျရတဲ့ အနအေထားဖွဈပါတယျ Ref: DVB Interview
Local PDF အဖွဲ့တွေထဲမှာ အဖွဲ့တဖွဲ့ရဲ့ ဆက်သွယ်ပုံကို ပြောပြလာတဲ့ ပိုးဖြူသန့်
CDM လုပ်သွားတဲ့ တပ်ကြပ်ကြီးရဲ့မိသားစု အဖမ်းခံရ